वावुराम भट्टराईका कार्यकर्ता लागुऔषध ओसार पसार धन्दामा ! – YesKathmandu.com
वावुराम भट्टराईका कार्यकर्ता लागुऔषध ओसार पसार धन्दामा !
आइतबार २६, असार २०७३
शिक्षादेखि साधनका हिसाबले समेत पछि पारिएका नेपाली युवालाई बन्दुक भिराएर प्रशिक्षित लडाकुचाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू नयाँ पार्टीतिर लागे पनि उनीहरूद्वारा प्रशिक्षितचाहिँ धमाधम अवैध लागुपदार्थ कारोबारमा पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
गत साता मात्र बालाजुको माछापोखरीस्थित सडकमा पूर्वछापामार लडाकु जगत पुन अवैध लागुपदार्थ ब्राउन सुगरसहित समातिएका छन् । उनीसँगै ६८ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ पर्नेमा पूर्वअयोग्य लडाकु अक्तबहादुर घर्तीमगर र प्रवेश डिसी छन् ।
जगतको घर रुकुमको चुनुवाङ–७ हो । उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनसेना शिविरमा बसी नेपाली सेनामा समायोजन हुन गएनन् । उनले जनसेना भएबापत सरकारले दिएको पाँच लाख रूपैयाँ भने लिएका थिए । पक्राउ परेका अक्तबहादुरको घर रोल्पाको कोटगाउँ र प्रवेशको पनि गैरीगाउँ गाविसमा छ । प्रहरीले शंका लागी सोधपुछ गर्दा नबोली भाग्न खोजेकाले तलासी लिँदा लागुऔषध फेलापरेको हो ।
एकै दिनमा पाँच पटक प्रचण्ड ओली टेलिफोन संवाद प्रचण्डको दाउ : सके सरकार फेर्ने नसके आफ्ना मन्त्री फेर्ने
मन्त्रीका बिषयमा एमाओवादीभित्र विवाद, महरा र रायमाझी गृहमन्त्रीमा टक्कराए
जघन्य अपराधका पाँच सय अभियुक्तलाई आममाफीको तयारी
नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनमा सांसदहरु तटस्थ र अनुपस्थित हुन नपाउँने
बर्षामा पहिरोले ८ वटा नदी थुनिने खतरा, नागरिक त्रस्त
यी आठ नेपाली जसलाई विश्वले खोजी रहेको छ
गृहमन्त्रीले भने : संक्रमणका बेला बलात्कार भइरहन्छन
मन्त्री चित्रलेखा यादव र डा. केसीबीच यसरी चल्यो ‘मृत्यु’ जुहारी
उपेन्द्र यादवले कुर्सी पाउनेभएपछि………
मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
नवराज सिलवालविरुद्धको किर्ते अभियोगमा पुन अनुसन्धान हुने